यस्ता छन भियाग्राको साइड इफेक्ट: पेट फुल्ने, बेहोश हुने अरु के के छन त ? - Mitho Khabar
June 12, 2022 mithokhabarLeaveaComment on यस्ता छन भियाग्राको साइड इफेक्ट: पेट फुल्ने, बेहोश हुने अरु के के छन त ?
यस्ता छन भियाग्राको साइड इफेक्ट: पेट फुल्ने, बेहोश हुने आरु के के छन त ? शारीरिक सम्पर्कलाई सक्रिय बनाउन भियाग्रा जस्ता औषधिहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसले यौ.., क्षमता कमजोर भएका पुरुषहरुको यौ.., क्षमता बढाउँछ ।
चिकित्सकले कमजोर यौ.., क्षमता भएका पुरुषहरुलाई भियाग्रा खाने सल्लाह दिन्छन् । तर, चिकित्सकले भियाग्राको प्रयोग सुरक्षित मान्दैनन्। भियाग्राको प्रयोग गर्ने पुरुषहरुमा बाहिरोपनको समस्या आइरहेको छ । ब्रिटेनमा भियाग्रा प्रयोग गर्नेहरुले पछिल्ला पाँच वर्षमा धेरै प्रकारका समस्याहरु झेल्नुपरेको बताएका छन् ।
प्लेब्वाई बोस नामका एक चर्चित ह्युग हेफनरले एक पटक धेरैवटा भियाग्रा सेवन गरेका थिए जसको कारण उनमा बहिरोपना आएको थियो । सन् २०१७ मा ९१ वर्षको उमेरमा नि-ध-न भयो। अन्य प्रयोगकर्ताहरुले उनीहरुको गो- प्य अंगमा समस्या आएको बताए । उनीहरुले लामो समयसम्म पी-डा महसुस गरेको बताए।
रिपोर्टका अनुसार जेनरिक भर्जन सिल्डेनाफिल र भियाग्रासँग जोडिएका ५४३ साइड इफेक्ट छन्। यो आंकडाका सन् २०१७ पछि पीरियडलाई कभर गर्छ। भियाग्रा लिनेहरुलाई बान्ता हुने, बेहोश हुने, पेट फुल्ने, कम्मर दुख्ने, कन्फ्युजन र स्मरणशक्ति घट्ने जस्ता साइड इफेक्ट देखिए ।
बालेनले प्रधानसेनापति शर्मालाई भेट्नुको रहस्य खुल्यो, देशभरका नेपालीलाई लाभ